Baarlamanka Soomaaliya oo xukuumadda dib ugu celiyey heshiiski ay la gashay shirkadda FAVORI – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka Soomaaliya oo xukuumadda dib ugu celiyey heshiiski ay la gashay shirkadda FAVORI
Muqdisho – Mareeg.com: Barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dood manta uu ka yeeshay shirkadda Turkiga ah ee FAVORI LLC, islamarkaana maamusha garoonka diyaaradaha Aaden Cadde ee magaalada Mqudisho waxey ku go’aamiyeen in heshiiskaas dib loogu celiyo xukuumadda si ay dib u eegsi ugu sameyso.
Kulanka baarlamaanka ee manta oo uu shir gudoominayey Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” ayaa waxaa soo xaadiray 149 xildhibaan.
Furitaanka kaddib ayaa mudaneyaasha baarlamaanka waxa ay guda galeen inay heshiiskaasi u qaadaan cod gacan taag ah oo ku aadan in shirkaddu ay sii shaqeyneyso iyo in kale.
Qaar ka mid ah xildhibaannadii ka hadlay heshiiska xukuumaddu la gashay shirkadda FAVORI ayaa waxey soo jeediyeen inaan lagu fududaan in shaqada ay shirkaddan ka hayso garoonka diyaaradaha laga joojiyo, balse loo baahan yahay in xukuumadda lagu celiyo, halka kuwo kalena ay soo jeediyeen in shaqada oo dhan laga joojiyo, heshiis cusubna ay gasho.
Markii codeyntu dhacday ayaa guddoomiyaha Baarlamaanka, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari wuxuu ku dhawaaqay natiijada codbixinta.
“Waxaa codeysay 139, Mudane, 124 Mudane waxa ay isku raaceen in heshiiska dib loogu celiyo xukuumadda, 13 way ka aamustay, 2 mudane wey diideen heshiiska, marka natiijadu ha laceliyo waaye, xukuumadda ayaana ku celinay” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari.
Dib u celinta heshiisku maaha in shirkadda FAVORI LLC shaqada laga jiijiyey, hase ahaatee waxaa xukuumadda looga fadhiyaa iney wax ka badesho qaab heshiiskaasi ah, dib markale baarlamaanka u horkeento.
Shirkadda FAVORI LLC oo laga leeyahay dalka Turkiga, ayaa lagu wareejiyay maamulka garoonka diyaaradaha Muqdisho bishii September ee sannadkii hore, iyadoo howsha kala wareegtay shirkad kale oo ka horreeyay oo lagu magacaabi jiray SKA AIR & LOGISTIC.
80 agaasime wasaaradeed oo tababar looga furay Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir oo digniin u diray gaadiidka la baxsada canshuurta